जेठ, काठमाडौं । ‘धेरै पत्रकारले त्यस्तो ठाउँमा कसरी जनगणना गराउनु भयो ? डर लागेन, कत्रो हिम्मत् ? भनेर सोध्छन् । उनीहरूलाई भन्ने गरेको छु–निर्विवादित क्षेत्रमा निर्भीकताका साथ जगगणना गराएँ । त्यतिबेला लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्नेमा कहिँकतै विवाद थिएन ।भारतको धार्चुला, पिछुवागढतिर जनगणना गर्न गएको भए पो समस्या हुन्थ्यो त । मेरो मुलुकुभित्र जनगणनाका लागि जाँदा के को डर ? कसको डर ?’
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले ३९ हजार ५०० हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरू नक्साको चुच्चो भागमा करिब ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि पर्ने बताउँछन् । यो क्षेत्रमा सिमा विवाद रहेको भारत स्वयमले समेत स्विकारीसकेको छ ।